Awona maqhinga aphambili eParchis STAR | I-Androidsis
Awona maqhinga aphambili eParchis STAR
UDaniPlay | 08/04/2021 08:30 | Imidlalo ye-Android
Imidlalo yeBhodi isagcinwa njengolonwabo Enkosi ngento yokuba abantu abaninzi banokuthatha inxaxheba. Ngamnye kubo unemithetho yakhe, ebalulekileyo ukuze akwazi ukudlala ngokufanayo nabanye abadlali beqela abenza umdlalo, nokuba kukwimidlalo yamakhadi okanye kwiibhodi zeetafile.
Omnye wemidlalo yevidiyo esele ifumana ukuthandwa kule minyaka idlulileyo yiParchis STAR, isihloko esithandwayo sasimahla esivela kwiVenkile yokuDlala esinokukhutshelwa ngaphezulu kwezigidi ezingama-50 Sisicelo sokuchitha ixesha elimnandi nosapho, abahlobo kunye nabantu abavela kwenye ikona yomhlaba.
Sisihloko sokudlala iParcheesi ngeethayile ezine zizonke, iqengqiwe ngedayisi ukusuka ku-1 ukuya ku-6 kwaye lowo ufika nazo zonke iithayile ekhaya phakathi ebhodini uya kuphumelela. Ukwenza oku, kuya kufuneka abaleke abakhuphisana naye, apho kule meko zinokwahluka ngokuxhomekeke kumdlalo.
1 Zuza iingqekembe
2 Zuza iimali ezingenasiphelo
3 Cima umsebenzisi weendwendwe kwaye wenze enye
4 Soloko uphumelela kwiParchis Star
5 Uyifumana njani iperile kwiParchis Star
6 Indlela yokufumana iigugu
7 Amatye asimahla akhuthaza iParchis Star
8 Nqanaba ngokukhawuleza ngeBooster
Ukujonga iiNtengiso: KwiParchis Star kunokwenzeka ukuba ufumane iingqekembe, ukuze ufumane ezinye kungcono ukuba ukwazi ukubona izibhengezo zemihla ngemihla, ubuncinci ukuba ufuna ubuncinci bezona zisisiseko. Ukwenza oku, cofa kwisakhelo ngasentla ngasekhohloKukho imisebenzi ekufuneka uyenzile ukuba ufuna ukufumana olu hlobo lweengqekembe. Iividiyo zihlala ziba malunga nemizuzwana engama-30 kwaye unokubukela ukuya kuthi ga kwimizuzwana emi-5-6 kwaye imbuyekezo ziingqekembe zegolide ezingama-250, 300, 350 nama-500.
Ukuphumelela imidlalo: Ukuba uhlala uphumelela imidlalo kwiParchis Star Olu ayizukuba lulo naluphi na uhlobo lwengxaki, ke uyakufumana iingqekembe ezininzi. Ukuba awunayo iichips akunakulindeleka ukuba ukwazi ukudlala imidlalo, ngenxa yoko unokuhlala ubhenela ekubukeni iintengiso.
Dlala kwiLigi: Enye yeemfuno zokubanakho ukukhuphisana kwiLigi kukuba ubuncinci kwinqanaba le-4, ukusuka kwiBronze League uya kuba nakho ukufikelela kwiTitan League ukuba ulungile. Iingqekembe zemali oziwinileyo zininzi kwaye awuyi kuphelelwa yiyo nayiphi na into ukukhuphisana kwitumente ehlala isasazwa.
Zuza iimali ezingenasiphelo
Elinye lamaqhinga asemthethweni eParchis Star kukusebenzisa iapps ebizwa ngokuba yiParallel Space, eyaziwa ngokuphinda-phinda usetyenziso, esetyenziselwa ukusebenzisa iiakhawunti ezimbini ze-Twitter, i-Facebook, njl. Iya kusetyenziselwa ukuhambisa iingqekembe, phakathi kwamanye amaqhinga eParchis Star, kuba ngumsebenzi olula ukuyisebenzisa. Kuyimfuneko ukuba usebenzise inguqulelo enesuntswana lama-64, inguqulelo yama-32-bit ayizukusebenza nesicelo.
Ukwenza oku, faka iSithuba esiFanayo, unike iimvume ezahlukeneyo, khetha usetyenziso lokuhambelana, ngokubuza ngeParchis Star, eyona inomdla kuthi Cofa ku "+" kwaye ekugqibeleni ukhethe usetyenziso. Qala i-Parchis Star kwiNdawo efanayoIsithuba esifanayo siya kukucela ukuba ukhuphele u-64-bit version, wamkele kwaye unike zonke iimvume kwakhona.
Kwi-Parchis Star clone ye-Star Parallel kufuneka udlale njengendwendwe, Ungaze ngeakhawunti yakho yesiqhelo ukuze ube nakho ukungabonakali kwaye ungatsali ingqalelo. Cofa kwimowudi yomdlalo, yenza umdlalo omtsha ngokunqakraza kwi icon esembindini kwaye ubhale inombolo ezakukubonisa, ngenombolo onokumema abanye abantu, okanye udlale ngale akhawunti iyintsomi.
Ngoku nciphisa isithuba esilinganayo ukuvula usetyenziso lweParchis Star kwidesktop yakho, cofa kwimowudi yokudlala nabahlobo kwaye ubhale inani lomdlalo orekhodileyo. Nje ukuba ungene, uya kuqhagamshela kumdlalo, uvule iSithuba esiFanayo kwakhona, Uya kubona ukuba iprofayile yefowuni yakho sele ikumdlalo, kunye neakhawunti yeendwendwe iqengqa idayisi, nje ukuba kwenziwe le nto cofa «Buyela» ukuphuma kumdlalo, ubonise umyalezo ukuba uya kulahla ukubheja kweemali, kodwa yiyo ekhangelwe, inika okufanayo kwiakhawunti yakho ephambili.
Ngoku ngeakhawunti yakho yeselfowuni uya kunyanzelwa ukuba uqengqe idayisi, Yenze kwaye iya kukubonisa umyalezo wokuba uphumelele umdlalo. Into elungileyo kukuba uya kufumana isixa semali esiyi-500, kuba iingqekembe zakho ezingama-500 azibalwanga, kodwa awulahleki xa udlala nendwendwe olwenziwe nguwe.
Indawo efanayo - iiAkhawunti ezininzi
Umthuthukisi: I-LBE Tech
Cima umsebenzisi weendwendwe kwaye wenze enye
Umsebenzi ekufuneka siwenzile ukuze isicelo singazi into esiyiyo ayikushiya naluphina ulwazi, kuba yonke le nto iyenzeka ukucima idatha yeParallel Space. Liqhinga elilula kakhulu neliluncedo ukuba sifuna ukuba neengqekembe ezingenasiphelo, kuba ngumsebenzi othatha ixesha elincinci.
Ukwenza oku, yiba nomonde kwaye wenze inyathelo elilandelayo ukuze wenze omnye umsebenzisi weendwendwe oza kuphulukana naye kwaye unike amanqaku kwiakhawunti ephambili. I-Parchis Star ikuvumela ukuba udlale ngeakhawunti yeendwendwe okanye ngeakhawunti eyenziweyo, ungasebenzisa iakhawunti ye-Facebook okanye i-imeyile enegama eligqithisiweyo.
La manyathelo ngala alandelayo:
Fikelela kuseto lwefowuni yakho ephathekayo
Khangela "ii-aplikeshini", cofa kuyo kwaye ufumane indawo efanayoCofa
Ngoku kugcino, cofa ku "Sula idatha ye-cache" kunye nedatha yesicelo
Oku kuyakwenza ucime nawuphi na umkhondo waloo msebenzisi wenziwe njengo "Ndwendwe"
Oku kunokuphindaphindwa amaxesha amaninzi njengoko ufuna, ukuze uphumelele i-500 zemali kumdlalo ngamnye odlalwe ngendlela ebubuxoki. Iingqekembe zibalulekile ukuze udlale kwi-Parchis Star, ke ukuba unamawaka kunye namawaka uzakudlala imidlalo nabahlobo bakho ngaphandle kokubona iintengiso okanye usoloko uphumelela imidlalo.
Soloko uphumelela kwiParchis Star
Ngalo lonke ixesha gcina kwizikwere apho uya kuhambisa khona nganye iithayile kwaye uqinisekise nanini na apho unakho, konke ngaphandle kokubeka umngcipheko ngokuchasene neembangi. Ukutya i-chip yomchasi kungcono ukuba nenani eliphezulu, kodwa ukuba uneqela uya kuba nentshukumo engakumbi ukuze ungabi phambi komntu.
Soloko uzama ukuba nomqondiso omnye emva komnye ngamanye amaxeshaNangona uhlala ujonge ukuba omnye umchasi akafikeleli kwindawo yokubulala ubuncinci omnye wabo, gcina umqolo wakho ugqunywe kakuhle. Ubuncinane iichips ezimbini kwibhokisi ekhuselekileyo, linda ukuba umdlali ophumeleleyo aphumelele kwaye ukuba unethuba, yidle.
Ukuba udlala njengeqela elinye iqabane kuqala qinisekisa ukuba enye yezi zinto zimbini iyafikelela kwinjongo, iqhinga elililo kwiParchis Star kukutya zonke iichips ukuqhubela phambili. Xa umntu efika, elandelayo iya kuba nokuhamba kabini ngemiqolo yomnye nomnye, ke inkqubela phambili iya kukhawuleza. Sebenzisa iiperile unokutshintsha enye yeembaleki ezimfutshane, ngakumbi ukuba ufumana u-1 okanye u-2.
Uyifumana njani iperile kwiParchis Star
Enye yezinto eziya kusenza sibe nokubaleka okungaphezulu kwesinye kukufumana iiperile (ezaziwa ngokuba ziigugu), ziyafezekiswa ngokuthumela iiperile (amatye anqabileyo) kubahlobo bakho be-Facebook kunye nokubukela iividiyo zesicelo. Ngeeperile unokufumana kwakhona izincedisi, kubandakanya iidayisi zenye isitayile, iithokheni ezizezakho, phakathi kwezinye izinto.
Ngezikhumba unesikhuthazo esinye sokuqhubeka nokunika iParchis Star inkangeleko entsha ukuze ingaphindaphindeki, ke ilungele abo badlali bayifakileyo ixesha elide okanye abo bafika batsha. Ukuba ufuna ukukhetha umdlalo omtsha wedayisi okanye amathokheni, yiya kuqokelelo ukhetho.
Indlela yokufumana iigugu
Ukuthatha inxaxheba kwiLigi: Ukuba ufuna ukufumana iiGEMS, into ekufuneka uyenzile kukuthatha inxaxheba kwiLigi, ukhetho lokwenza njalo luya kwahluka, kuba kunokwenzeka ukudlala ezahlukeneyo. I-Bronze League nangona inzima, iya kunyanzeleka ukuba ihlale kuyo ukuba ufuna ukuphumelela iigugu ezininzi.
Amabhaso: Kwiqhosha elikufutshane negems uza kufumana amabhaso ebhonasi. Qengqa idayisi kwaye uzuze amabhaso anomdla, kunye nabahlobo banokukuthumela iidayisi. Amabhaso amnandi kwaye asetyenziselwa ukufumana ubuncwane obungakumbi, obuza kuqokelela uninzi ekupheleni kosuku ukuba uhlala udlala ubuncinci imidlalo emininzi ngemini.
Amatye asimahla akhuthaza iParchis Star
Enye yezinto zokufumana amatye asimahla kwiParchis Star Kukukhuthaza umdlalo wevidiyo ye-Android kuFacebook, ngenxa yoku uya kufumana amabhaso anomdla, kubandakanya neempawu ezinqabileyo. Kule nto abahlobo bakho kufuneka bakuthumelele iidayisi, ungathumela kwakhona ukuba uyafuna ukuba badlala iParchis Star.
Ukugqibezela iiligi kwiParchis Star uza kufumana amakhulu amatye anqabileyo, kuba oku kuya kufuneka ukwenze ngexesha ngalinye lonyaka lobuntshatsheli. I-Bronze League ithathwa njengeligi elikhuphisanayo, kodwa ayisiyonto inzima, kuba unokukhuphisana nabanye abachasi.
Nqanaba ngokukhawuleza ngeBooster
Enye indlela yokuphakama ngokukhawuleza kukusebenzisa iBooster, Inqaku lomdlalo ofunyenwe njengomvuzo okanye unokuthengwa ngaphakathi komdlalo. Umsebenzi ophambili kukuba uphakame ngendlela ekhawulezileyo, esemthethweni ngokupheleleyo yiParchis Star.
Ukufumana isibonelelo esipheleleyo seBooster, kungcono ukuba unikele ixesha elininzi wakube usebenze, kuba inexesha eliqikelelweyo. Ukunyusa kuya kukwenza ubeke kakuhle kakhulu ngexesha olifumanayo, ke kubalulekile kwabo baqala ukuqala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Awona maqhinga aphambili eParchis STAR
Solitaires -Ukuqokelelwa kokugqibela kuVuselelwe ngeendlela ezi-4 zeMidlalo eNtsha nangakumbi